Development System - Cofttek Holdings limited
Cofttek nwere ike inye ọrụ ndị na-esonụ, ndị iwu anyị siri ike na Nchebe nke Intellectual Property (IP) kwadoro nke a niile, na-eme ka arụ ọrụ rụọ ọrụ na nkweke siri ike nke oge niile.
Usoro nhazi-site na
grams site n'aka Metric Tons
Nkwado nyocha zuru ezu
gụnyere HPLC, GC-MS na NMR
Maka ngwaahịa ebe usoro nhazi nwere ugbua, Cofttek nwere ike inye nkwekọrịta na ọrụ ntinye aka na nkọwa onye ahịa. Na mgbakwunye na ọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, anyị na-enyekwa ọkachamara ọkachamara na-arụ ọrụ ego (na-enweghị ụgwọ ọzọ) iji hụ na, n'ebe ọ bụla o kwere omume, anyị na-eji isi ihe ndị dị elu na ahịa ahịa asọmpi.
Cofttek nwekwara ike ịnye nyocha ọchụchọ na ọrụ mmepe nke ndị ọkachamara chọrọ. Anyị nwere ihe ndekọ dị mma maka ịmepụta ihe mgbagwoju anya maka ihe ndị siri ike maka ndị ahịa anyị na ọrụ anyị nwere ike ịdabere na oge niile (FTE) ma ọ bụ ọnụego kwa ụbọchị. Kpọtụrụ anyị ka anyị chọpụta otú ndị ọrụ R & D anyị nwere ike ịme nke ọma nwere ike isi mee ka ọrụ ọzọ gị nwee ọganihu ọhụrụ.